Perm ntutu anya - ihe niile ịchọrọ ịma | Bezzia
Susana godoy | 13/09/2021 10:00 | Mma
Nku anya ga na -elekọtakwa ha mgbe niile, n'ihi na ha ga -enyekwu anyị ihu n'ihu na n'ihi na ọ bụ akụkụ ya. Yabụ, n'ime ọgwụgwọ anyị ga -achọtara ha, anyị nwere ntutu anya perm. Ikekwe ị nụla ọtụtụ ihe gbasara ya ugbu a.
Ọ dị mma ugbu a, anyị ga -ewepụ obi abụọ niile a na -eme gburugburu ya. Yabụ na ọ bụrụ na ịchọrọ nweta anya na -enweghị ngwụcha ekele nku anya gị, mgbe ahụ ị nọ ebe kwesịrị ekwesị. Ị ji n'aka na -amasị gị ebe ọ bụla ị na -eji ụdị pụrụ iche.
1 Gịnị bụ perm ntutu anya?
2 Ogologo oge ole ka nku anya anya na -adịru?
3 Kedu ihe dị iche n'etiti iweli nku anya na -adịgide adịgide
Gịnị bụ perm ntutu anya?
Anyị nwere ike ịsị na anya nku anya bụ ọgwụgwọ ga -agbagọ. Ọ bụ eziokwu na anyị agaghị eji ebili mmiri hụ ha, mana a na -akpọ ya curling n'ihi na ọ na -aka akara ihu karịa karịa. N'ezie mmetụta ikpeazụ bụ na anyị ga -achọpụta etu nku anya na -adị ogologo.. Maka nke a, ịchọrọ ụdị gel nke ga -edozi usoro yana curlers ma ọ bụ rollers. Ihe a niile bụ ihe pụrụ iche maka mpaghara a, n'ezie. Yabụ nsonaazụ ga -adị ogologo ma nwekwuo nku anya, ruo ogologo oge. Yabụ, dị ka anyị kwuru na mbido, ọ ga -eme ka ị hụkwuo anya nke ukwuu ma ị ga -enwe ọmarịcha anụ ahụ.
Ogologo oge ole ka nku anya anya na -adịru?
Eziokwu bụ na ọ bụ ọgwụgwọ na -ewe ihe dịka otu elekere, mana ọ ga -adịte aka. N'ihi na anyị nwere ike nọrọ ihe dị ka ọnwa 3 yi nsonaazụ nke ntutu anya. Ọ bụ eziokwu na taabụ ọhụrụ ga -apụta n'oge a niile. Yabụ nsonaazụ ya nwere ike ịdịtụ iche, ebe ọ bụ na ụfọdụ ga -ahụ ka ọ na -agbakọ na nke ọhụrụ, ọ bụghị. Yabụ, ka ọnwa ole na ole gachara, ọ dị mma ịlaghachi na ebe mara mma iji nye ya aka ọhụrụ. Ị maralarịrị na ozugbo etinyere ọgwụgwọ ahụ, a na -ahụ nsonaazụ ya ozugbo, yabụ ị ga -enwekwa ọ enjoyụ ọzọ na ọmarịcha anya ahụ nke masịrị gị nke ukwuu.
Kedu ihe dị iche n'etiti iweli nku anya na -adịgide adịgide
Anyị ekwuola na nku anya nku anya bụ ọgwụgwọ iji tụgharịa ha. Kedu ihe kpatara na anyị nwere otu n'ime ndị ahụ anya a na -akpọ XXL. Ọ bụrụ na ị nwere nku anya ogologo, ọ ga -adịrị gị mma maka na ị nwere ike nye ya ụdịdị karịa, nsonaazụ ya ga -abụkwa ihe ebumpụta ụwa.
N'ezie mgbe anyị na -ekwu maka ya ntutu anya anya anyị na -ekwu maka ọgwụgwọ maka ndị nwere nku anya ha dị nkenke. N'ihi na usoro a na -eme ka ha gbatịa mana site na akụkụ mgbọrọgwụ, nke na -ahapụkwa anyị mmetụta nke nku anya dị ogologo. Yabụ na perm ga -enye ha ntakịrị agbagọ agbagọ na mbuli elu ga -agbatị ha kpamkpam. Usoro a dịkwa iche, ebe ọ bụ na achọrọ curlers na gel idozi na perm, mana na mbuli elu, a na -ekewa nku anya, na -amalite site na ntọala etinyere na mpaghara nkuchianya.
Yabụ, anyị nwere ike ikwu nke ahụ ha niile bụ ọgwụgwọ dị iche iche, nke ị nwere ike ịnwale n'ọnọdụ abụọ a, n'ihi na ị ga -achọpụtarịrị ihe ịchọrọ n'ezie ma ọ bụ ihe kacha masị gị. N'ihi ya, ọ gaghị abụrịrị otu maka gị. Ị nwere ike họrọ ka ha abụọ buru gị pụọ ka ị hụ nke bụ nke nwere nsonaazụ kacha mma na ihu gị. Site na ya, ihe ị ga -eme bụ itinye ụdị hydration na nku anya gị iji lekọta usoro a, dị ka dobe mmanụ, ị gaghị achọ mascara n'ihi na anya gị ga -ama mma n'onwe ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Mma » Ntutu ntutu anya: Ihe niile ịchọrọ ịma
Ọkachamara ọkachamara: Otu esi eme ya site na nkwụsị